Ukuvela kwepasipoti eyodwa yase-Afrika kanye nokuqedwa kwama-visa phakathi kwamazwe ase-Afrika - AFRIKHEPRI
Ukuvela kwepasipoti eyodwa yase-Afrika kanye nokuqedwa kwama-visa phakathi kwamazwe ase-Afrika
Ipasipoti ye-pan-Afrika ehlukile
Usuke usabela "Ukuvela kwepasipoti eyodwa af ..." Imizuzwana embalwa edlule
LInhlangano yamazwe ase-Afrika iveze ukuthi izwekazi lase-Afrika maduze lingasenamkhawulo ngokwethulwa kwepasipoti yase-Afrika njengengxenye ye-Ajenda ye-African Union engu-2063. Akungabazeki ukuthi lokhu kuthuthukisile ukujikeleza kwezakhamizi nezimpahla.
UCommissioner we-AU wezombangazwe uDkt Aisha Abdullahi uthe ngeSonto ukuthi i-Afrika ingasheshe ibe ngumngcele futhi ipulani yepasipoti eyodwa yase-Afrika iyaqhubeka.
“Abantu base-Afrika ngeke badinge i-visa yokufinyelela kwezinye izifundazwe zase-Afrika. Kuzoba nokuhweba kwamahhala kwezimpahla " kusho uDkt Abdullahi engqungqutheleni ye- #Africities.
"Sithole amaphrojekthi e-flagship, njengokusungulwa kwepasipoti yase-Afrika ukuqinisekisa ukuthi abantu base-Afrika bangahamba ngokukhululekile kuwo wonke amazwe ase-Afrika," kusho uDkt. Abdullahi.
Ukwakhiwa kwepasipoti yase-Afrika ingenye yamaphrojekthi okufanele aqaliswe eminyakeni yokuqala ye-10 ye-AU 2063 Agenda. Le phrojekthi yavunyelwana ngonyaka odlule, ihlose ukuthuthukisa ukuhweba kwe-Afrika kanye nokugqugquzela ukuhamba kwezimpahla phakathi kwamazwe aseLungu.
Ngokombiko we-African Development Bank (AfDB), "umbono we-AU uphambene nesicelo sokwenza isethulo se-passport yase-Afrika nokuqeda imfuneko ye-visa kubo bonke izakhamuzi zase-Afrika kuwo wonke amazwe African kusuka lapha 2018 ".
Phakathi naleso sikhathi, i-ADB iqedela, "I-Opening Africa Visa Index Index," ehlanganisa amazwe ase-Afrika ngezinga lokuvuleka / ukuvinjelwa kwama-visa, okuhloswe "ukushayela izinguquko zenqubomgomo. ama-visa ase-Afrika, lula izinqubo zokufaka izicelo ze-visa futhi ukhuthaze ukulungeleka okulungile ".
Lo mbhalo sewabiwe izikhathi ezingama-50111!
Lo mbhalo sewabiwe izikhathi ezingama-50209!